Hojjettoonni biiroo qonnaa sadarkaan jiran imaammata mootummaan baaseefi rifoormii gaggeeffama jiru beekuun jiruufi jireenya qonnaan bulaa keenyaa jijjiiruuf itti gaafatamuummaa dachaa qabdan bahachuu qabdu - Obbo Dhaabaa Dabalee - ETHIOPIANS TODAY
February 18, 2021 - by Chala Dandessa - Leave a Comment
Leenjii guyyoota afuriif seena ijaarsa biyyaa, riifoormii gaggaeeffamaa jiruu, tajaajila siivil servantiifi kallattii fuula duraarratti barreeffamaa qophaa’ee, ibsa kennameerratti mareen gabbisuun dhumarrattis kallattii fuula duraa kaa’ame irratti hirmaannaa ho’aa taasisuun hubannoo waliigalaa argachuun xumurame.
Hojjetaan Mootummaa dhimma biyyaafi riifoormii gaggeeffamaa jiru hubachuun dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadaniirratti hojjechuufi kallattii fuula duraarratti leenjiifi maree bal’aa gaggeeffameen hojii ijaarsa biyyaa keessatti hojjennuuf yaada galtee ta’uu danda’u arganneerra jedhan Obbo Dhaabaan.
Qabsoo biyya ijaaruu kana keessatti gaheen Oromootaafi gootota saba kana keessaa bahanii gama hundaan olaanaa ta’uufi isa kana immoo sirriitti beeknee olkaasnee beekamtiin kennamuufii akka qabu Obbo Dhaabaan kaasaniiru. Biyyi Itoophiyaa biyya taatee akka itti fuftuuf dabaafi hacuuccaa sirnoota darbanirratti qabsaa’uun osoo biyyi hin diigamiin gaaffiiwwan gurguddoo akka sabaatti gama siyaasaafi dinagdeetiin jiran irratti qabsaa’uudhaan mirga Saba Oromoofi sab-lammoota biraas akka kabajamuuf gaheen Oromoo Olaanaa ta’uusaa Obbo Dhaabaan ibsaniiru.
Sirnoota darban keessa ta’aanii qabsaa’uufi gadhiisanii ba’uun qaboo keessaafi alaatti gootonni keenya gaggessaniin osoo biyyi hin diigamiin tooftaa olaanaafi fageessanii yaaduudhaan hojii boonsaa ilma saba Goota kanaa kan ta’e Muummichi Ministeeraa keenya Kab. Dr. Abiyyi Ahimed biyyittiidhaaf jijjiirama waliigalaa yeroo gabaaba keessatti galmeessisuun cimina saba kana addunyaarratti agarsiisaa jira.
Isa kana hubachuun ijaaramaafi tokkummaa keenya cimsuun deeggersa barbaachisu taasisuun hanqinoota nu bira jiran fooyyessuun fuulduratti tarkanfachiisuuf guyyaafi galgala hojjetamuu akka qabus Obbo Dhaabaan dubbataniiru.
Riifoormiin dinagdee aantummaa Q/H bulaa giddu-galeessa godhate seerotaaf qajeelfamoota danqaa turan fooyyessuun hojiin qabatamaan dinagdee qonnaarratti hojjetamaa jira. Gaaffiin guddaan saba Oromoo gaaffii siyaasaadha. Kunis, aangoo argachuu waan ta’eef isa kana arganneerra waan ta’eef gaaffiin dinagdeefi kan biroon kana keesatti deebii argachuu akka danda’uuf hojjetama jirachuu Obbo Dhaabaan dubbataniiru.
Gaaffiiwwan akka sabaatti qabnu hundayyuu dhawaataan deebisuuf haalli itti jirru abdii kan namaaf kennu waan ta’eef akka deebii argachuu danda’us Obbo Dhaabaan ibsaniiru.
Hojjetaan Biiroo kana kallattiin imaammata qonnaan/horsiisee bulaa jijjiiruuf ba’u kan hojiirra oolchinu waan ta’eef utubaa dinagdee biyya kanaa kan ta’e hojii qonnaarratti adda durummaan hojjechuu akka qabu Obbo Dhaabaan ibsaniiru.
Hojiin hojjetamu iftoominaafi amanamummaan hojjetamuu qabu. Hojii gaggaarii gama qonnaan hojjechuu jalqabame cimee akka itti fufuu qabuufi jiruufi jireenya Qonnaan/Horsiisee bulaa keenyaa jijjiiruuf itti gaafatamummaa guddaa akka naannoo keenyaatti qabnu bahachuf humna, beekumsaafi yeroo qabnu hunda gargaaramnee tokkummaadhaan jabaannee hojjechuu qabna jechuun Obbo Dhaabaan dhaamaniiru. Dhumarrattis, ibsa ejjennoo abbaa qabxii 8 waliin baafachuun waliigaluun leenjichi goolabameera.
Previous Article Hanga gaaffiin keenya deebi’utti filannoon hin jiru’-KFO
Next Article ብሔራዊ ጀግና አክቲቪስት መምህር የማነ ንጉሰ ጀግናው በከሃዲዎች ተቀጠፈ – የትግራይ PP